5 ziipilisi zeLenovo zazo zonke iintlobo zeepokotho | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | lenovo, Amacwecwe e-Android
Iipilisi ze-Android azonwabisi njengezinye izixhobo ezinje ngee-smartphones ngokwazo. Nangona kukho iinkampani eziqhubeka nokusungula iipilisi ezinje nge Ezintlanu ezintsha ezivela eLenovo. Phakathi kwala macwecwe mahlanu e-Lenovo sifumana uluhlu ezimbini ezahlulahlula. Ezinye ziya kuba zekhaya kunye nosapho, ngelixa ezinye zenzelwe ukuba zifikeleleke kakhulu ngexabiso.
Nokuba kunjalo, sinolunye uthotho lwe Izixhobo ze-Android ezinezikrini ezinkulu ukonwabela umxholo wemultimedia, ukudlala umdlalo wefashoni okanye ukuzoba ngosiba esinalo ekhaya. Makhe sibone ukuba zintoni ezi pilisi zintsha zintsha zaphehlelelwa luphawu oludumileyo olujolise kwiiPC kunye neelaptops malunga.
1 I-Lenovo Tab E7, Tab E8 kunye neTab E10
2 I-Lenovo Tab M10 kunye neTab P10 yosapho
I-Lenovo Tab E7, Tab E8 kunye neTab E10
Kolu luhlu lwamacwecwe amathathu sineTab E7 njengowokuqala ukuza ne-Android Go Edition. Ngoku sinokuliqonda ngcono ixabiso layo, kwaye yile $ 70 ungayifumana. Izitshixo zeTab E7 zintathu: ii -apps ezilula, ukugcinwa okungaphezulu kunye nokusebenza okuphuculweyo. Kuya kufuneka sibabone behleli ukuze bazi ngokwenyani ukuba singafumana olona lwazi lufanelekileyo lomsebenzisi kwaye singahlali nje kwezinye ngaphezulu kweenjongo nje.
I-Tab E7 ibonakaliswa Isisombululo esisezantsi esingu-1040 x 600 kwiscreen esi-7 I-intshi, into enokunqongophala kwaye ichaza kakuhle ukuba i-Android Go Edition ithetha ntoni. Sithetha nangekhamera engasemva eyi-2MP kunye nekhamera engaphambili ye-0.3 MP VGA. Kwizibindi sifumana iMediaTek MT8163B chip evalwe nge-1.3 GHz kunye nokuba yintoni eyi-1 GB ye-RAM. Ukugcina kuhlala kwi-16GB, ke sinokuqala ukutsala ilifu kunye neefoto zikaGoogle.
Sikwanayo neLenovo Tab E8, nangona kufuneka kuthiwe yithebhulethi ene-Android 7.0 Nougat, into engaqondakaliyo kwezi ntsuku. Sine I-RAM efanayo, iprosesa kunye nokugcinwa njengeTab E7. Yintoni umahluko kwiscreen esinobungakanani bee-intshi ezi-8 kunye nesisombululo esiphakamileyo: 1280 x 800 pixels. Umgangatho weekhamera ukwandiswa nge-5MP yazo ngasemva kunye ne-2MP ngaphambili. I-Tab E8 igqiba ukuzicacisa ngebhetri efikelela kwi-4.850 mAh.
Sigqibe ngo i-trio yoluhlu lwe-Tab E, kunye ne-E10. Inayo i-Android Go Edition ngaphakathi kuyo, kwisoftware. Isikrini sikhulu njengoko sibizwa ngegama laso ukufikelela kwii-intshi ezili-10. Yintoni ukuhlala kwisisombululo esifanayo neTab E8. Ke sinokubona kakuhle ukuba iLenovo idlala njani ngeenkcukacha ezahlukeneyo ukuze sinike amaxabiso asezantsi.
I-Lenovo Tab E10 ine-chip I-Qualcomm Snapdragon 210 kwaye ifikelela kwi-2 GB Imemori ye-RAM. Yintoni engatshintshi ukusuka kwi-E8 ziikhamera zayo kunye nomthamo webhetri, ke sele sinesishwankathelo sokugqibela kwezi pilisi zine-Android Go Edition.
I-Lenovo Tab M10 kunye neTab P10 yosapho
Ezi zintathu zidlulileyo kufanelekile ukuba zibe setafileni kwigumbi lokuhlala, nangona Ithebhu M10 kunye neTab P10 zilungile ngale nto kanye. Banamacwecwe anamandla ngakumbi afanelekileyo ukuphosa yonke into esiyifunayo ngokwesoftware.
I-Lenovo Tab M10 ine-intshi ye-10 intshi ye-HD epheleleyo ye-IPS, chip yeQualcomm 450 GHz octa-core Snapdragon 1.8, I-3GB ye-RAM kunye ne-32GB yokugcina eyandisiweyo yangaphakathi kunye nekhadi le-MicroSD. Ezinye izibonelelo zezithethi zestereo zeDolby Atmos, ezilungele loo mizabalazo yemultimedia. Kananjalo asibulibali ubunzima bokukhanya nge-480 yeegramu kunye nobunzima beemilimitha eziyi-8,1.
I-Lenovo Tab P10 nayo ine-Android 8.0 Oreo njenge-M10 kwaye ibonakaliswa yi nokuba ucocekile, 7 millimeters, kwaye ubunzima obungaphantsi nge-440 gram. Ikwanayo ne-chip efanayo ye-Snapdragon 450, nangona iya kwi-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina ngaphakathi. Sigxininisa isivamvo seminwe kwaye kwakhona ezo zithethi zestereo, nangona ngeli xesha zine endaweni yezimbini kwi-M10.
Ukuba ujonge ithebhulethi yosapho olunikezelayo umgangatho omncinci ekufotweni, i-M10 iyahambelana ne-8MP ngasemva kunye ne-5MP ngaphambili. Ikwabonelela ngebhetri enkulu ukufikelela kumthamo we-7.000 mAh.
ILenovo Ithebhu E7 iya kufika ngexabiso lama-euro angama-79 ngenyanga ka-Okthobha. I-Lenovo E8 iya kuxabisa i-euro ezingama-119, nangona ifika kule nyanga ka-Agasti. I-E10 iyazihambela kude kube yinyanga ka-Novemba ngexabiso le-129 euros. Ezinye ezimbini ezishiyekileyo, i-Tab M10 kunye ne-P10, ziya kufika nge-199 kunye ne-269 euro ngokulandelelana kwinyanga ka-Okthobha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » I-Lenovo ibhengeza iipilisi ezintlanu ze-Android ezintathu zine-Android Go Edition